दोष वर्डप्रेस | Martech Zone
90,000 ह्याकरहरू अहिले तपाइँको WordPress स्थापनामा प्रवेश गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो एक हास्यास्पद तथ्या .्क हो तर यसले विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीको लोकप्रियतालाई पनि औंल्याउँछ। जबकि हामी सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीको बारे मा पर्याप्त अज्ञेयवादी छौं, हामी सँग WordPress को लागी गहिरो र गहिरो आदर छ र यसमा हाम्रा ग्राहकहरुको स्थापनाहरुलाई समर्थन गर्दछौं।
म यससँग सहमत हुन जरूरी छैन WordPress को संस्थापक जसले मुख्य रूपमा CMS को साथ सुरक्षा मुद्दाहरूमा ध्यान आकर्षित गर्दछ। जब व्यक्तिहरू प्रशासनबाट उनीहरूको प्रशासनिक लगईन परिवर्तन गर्न सक्दछन्, वर्डप्रेसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा सधैं १ क्लिक क्लिक स्थापना भएको छ। यदि तपाईं तिनीहरूलाई लगईन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो १ क्लिक भन्दा बढि छ!
थप रूपमा, मलाई यो तथ्य मनपर्दैन कि लगइन स्क्रिन एउटा हार्ड-कोडित पथ हो जुन परिमार्जन हुन सक्दैन। मलाई विश्वास छ कि यो WordPress को लागी अनुकूल मार्गको अनुमति दिन एकदम सजिलो हुन्छ।
त्योले भने, कुनै पनि एजेन्सी जसले WordPress WordPress साइटहरू निर्माण र समर्थन गर्दछ उनीहरूको बहुमत जिम्मेवार हुन्छ। हामी हाम्रो ग्राहकहरूको सबै होस्ट गर्दछौं Flywheel किनकी तिनीहरू सुरक्षा को लागी निगरानी र कडा पासवर्ड सुनिश्चित गर्न को लागी यस्तो आश्चर्यजनक काम गर्छन्। साथै, Flywheel भन्दा फरक फरक लगइन प्रयोग गर्न तपाईलाई आवाश्यक हुन्छ व्यवस्थापक जब तपाईं उनीहरूसँग एक WordPress उदाहरण सिर्जना गर्नुहुन्छ।
हामीसँग अन्य क्लाइन्टहरू छन् जुन WordPress सँग गम्भीर समस्याहरू छन् ... बगहरू, प्रदर्शन मुद्दाहरू, र गाह्रो प्रशासन। यी सबै वर्डप्रेस मुद्दाहरू होइनन्। तिनीहरू छन् WordPress विकासकर्ता मुद्दाहरू। हाम्रो ग्राहकहरु मध्ये एक एक बिक्री प्रस्ताव प्लेटफर्म हो - र तिनीहरूको साइटमा केहि धेरै अनुकूलित सामग्री छ। अर्को एजेन्सीद्वारा डिजाइन गरिएको, तिनीहरूको पृष्ठहरूको प्रशासन केही उन्नत अनुकूलन फिल्डहरू प्रयोग गरेर एकदम सरल छ।
प्रयोग उन्नत कस्टम फिल्डहरू, गुरुत्वाकर्षण फारम र केहि राम्रो थिम विकास, DK New Media एक ग्राहकको लागि सम्पूर्ण रोजगार स्टाफ साइट निर्माण गर्न सक्षम थियो। यो निर्धक्क कार्य गर्दछ र उनीहरूको कर्मचारीले भने कि प्रशासन सपना हो।
तपाईंको वर्डप्रेस साइट र तपाईंको WordPress सुरक्षा यसमा निर्मित पूर्वाधार जत्तिकै राम्रो छ र थिम र प्लगइनहरूको तपाईंले समावेश गर्नुभएको विकासको रूपमा राम्रो छ। WordPress दोष नदिनुहोस् ... नयाँ विकासकर्ता र यसलाई होस्ट गर्न नयाँ ठाउँ फेला पार्नुहोस्!
टैग: acfउन्नत कस्टम फिल्डहरूअनुकूलन WordPress विषयवस्तुहरूflywheelगुरुत्वाकर्षण रूपहरूसफलतामा साझेदारहरूशिखर साझेदारहरूटिन्डरबक्सWordPress विकासवर्डप्रेस ह्याक गरियोwordpress होस्टिंगWordPress सुरक्षाwpengine
मई 3, 2013 मा 9: 00 एएम
हामी जहिले पनि प्लेटफर्मको निर्मातामा फर्केर जान सक्दैनौं र भन्न सक्छौं "यो तपाईंको गल्ती भयो।"
मँ सहमत छु कि त्यहाँ केहि सुरक्षा छेदहरु छन् जुन WP ले वास्तवमा कहिल्यै सम्बोधन गरेको छैन, र म १ क्लिक स्थापना चाहान्छु। जे होस्, म अधिक सुरक्षित साइट मन पराउँछु, त्यसैले म त्यो अतिरिक्त कदम चाल्नेछु। मेरो गल्ति यो हो कि मैले नयाँ प्रयोगकर्ता नामको साथ एक नयाँ उबेर प्रशासक खाता सिर्जना गरेको भए पनि, मैले पुरानो प्रशासक खाता हटाएन। यसले मेरो साइट ह्याक हुन अनुमति दियो।
यी चीजहरूलाई हेराई गर्दा सजिलो हुन्छ किनकि हामी प्लेटफर्मका निर्माताहरूमा विश्वास गर्छौं, तर हाम्रो आफ्नै साइटको गेटकीपर हुन हाम्रो प्रतिक्रियाशीलता हो। हामीले राज्यलाई यस्तै थियो जसरी यो सुदृढ पार्नु पर्छ
मई 6, 2013 मा 3: 43 एएम
“थप रूपमा, मलाई यो तथ्य मनपर्दैन कि लगइन स्क्रिन एउटा हार्ड-कोडित पथ हो जुन परिमार्जन हुन सक्दैन। मलाई विश्वास छ कि यो WordPress को लागी अनुकूल मार्गको अनुमति दिन एकदम सजिलो हुन्छ। " म तपाईंसँग बढी सहमत हुन सक्दिन। यो तथ्य हो कि लगइन स्क्रिन कडा स c्केतनयुक्त मार्ग हो - / wp-प्रशासन - र तपाइँ त्यो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, मेरो रायमा, तपाईको ब्लगमा छिर्न प्रयास गरिरहेका ह्याकर्सको काम सहज पार्दै। यो लेख लेख्न को लागी धन्यबाद, धेरै चीजहरु छन् जुन संग म धेरै सहमत छु, डगलस।
मई 8, 2013 मा 7: 43 PM
त्यहाँ एक प्लगइन छ जसले तपाईंलाई तपाईंको प्रशासक र लगइन मार्गहरू परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ:
मई 8, 2013 मा 7: 44 PM
मैले प्लगइनहरू पनि हेरेको छु, तर यो एक मुख्य सुविधा हुनु आवश्यक छ जुन WordPress कन्फिगरेसनको अंश हो।
जुन 16, 2013 मा 4: 49 PM
"... WordPress को सब भन्दा ठूलो फाइदा सधैं १ क्लिक क्लिक स्थापना भएको छ"। तपाई वास्तवमै त्यो मतलब चाहनुहुन्न, हैन? म पूरै बाँकी लेखसँग सहमत छु, यद्यपि, र विशेष गरी सहमत छु कि यो एजेन्सीहरू, होस्टिंग कम्पनीहरू र विकासकर्ताहरूको रूपमा (नि: शुल्क) सीएमएस सुरक्षित गर्न अझ राम्रो काम गर्न हामीमा पर्दछ जुन पछिल्लो १० मा हामीलाई धेरै पैसा कमायो। बर्ष
जुन 16, 2013 मा 10: 26 PM
१-क्लिक स्थापना र रखरखावको निरन्तर सहजता बिल्कुल त्यस्तै हो जुन वर्डप्रेसको विकासमा विस्फोट भएको छ। म भन्दै छु कि एकमात्र लाभ हो - सयौं बढी छन्। तर त्यहाँ अन्य धेरै नि: शुल्क सीएमएस प्रणालीहरू छन् जुन सरल स्थापनाको अभावमा छ जुन WordPressले गरेको थियो ... जब व्यक्तिहरू उनीहरूलाई कन्फिगर गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले त्यसलाई छोडिदिए।
जुन 16, 2013 मा 11: 31 PM
तपाइँले भनेको कुराको लागि मैले प्राप्त गरेको छु, तर १-क्लिक एक वर्डप्रेस सुविधा हैन, यो होस्टिंग खाता सुविधा हो। WP 1 मिनेट स्थापनाको लागि प्रसिद्ध छ, यसको १-क्लिक स्थापना छैन। एक minute मिनेट स्थापना गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई संस्करण 5.० पछि प्रयोगकर्ता नाम छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। होस्टहरूले सजिलैसँग WP १-क्लिक स्थापना स्क्रिप्टलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ व्यवस्थापकको प्रयोगकर्ता नामलाई अधिक सुरक्षित बनाउनका लागि।
डब्ल्यूपी उडायो किनभने यसलाई समर्थन गर्ने समुदायले ठूलो जनस reached्ख्यामा पुगेको छ, केहि अन्य CMS गर्न असफल भयो। स्थापनाको सजिलो र चलिरहेको रखरखाव निश्चित रूपमा त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्‍यो, तर त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जुन त्यस भन्दा धेरै ठूलो प्रभाव पारिएको छ (उदाहरणका लागि अनुकूलन पोष्ट प्रकारको आगमन)।
अर्को बिन्दु बनाउनु यो हो कि त्यहाँ ,90,000 ०,००० ह्याकर्सहरू त्यहाँ छैनन् जुन ज्ञात डब्ल्यूपी स्थापनाहरूमा ब्रेक गर्न कोशिस गर्दैछ। त्यो गलत वर्णनको एक बिट हो। ,90,000 ०,००० आईपी ठेगानाहरू 90,000 ०,००० ह्याकर्सको बराबर हुँदैन, जसले बोटनेट भन्दा धेरै अधिक क्षतिको हिक सजिलै गर्न सक्दछ।
समग्रमा, मँ तपाईले भनेको भनेकोमा सहमत छु। हामीले WP लाई सुरक्षित गर्न कदमहरू चाल्नु पर्छ यदि हामी यसलाई हाम्रो ग्राहकहरूको समाधानको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौं भने। तपाईको WP स्थापना ह्याक गर्नु र कोर उत्पादनमा दोषारोपण गर्नु भनेको तपाईको पीसीमा भाइरस पाउनु जस्तै हो र यसलाई माइक्रोसफ्टको सुरक्षाको अभावमा दोष दिनु हो। हामी होशियार हुनु आवश्यक छ वा हामी सुरक्षा विकल्पहरूको अन्त्य गर्न जाँदैछौं जुन आधार आधारमा थप्न हामी चाहँदैनौं।
यो वास्तवमै जानकारीमूलक थियो - धेरै जसो मैले अनलाईनमा हेरे जस्तो छैन। साझेदारी 🙂